Ukuphehla amabhodlela epulasitiki angenalutho ku-Blow Molding
Faka kungobo yomlando kusuka kusigaba "Buffering"
Isidluliseli se-buffer senza umugqa ungavikeleki ukuma kwezitobhu. Ixazulula izinkinga zokulebula njenge-shrinkage yebhodlela, ukweqa okukhulu, ukumiswa njalo. Kwenyusa ukusebenza kahle komugqa wakho wokupakisha. Ungashintsha phakathi kokupholisa nokuhlikihla.
Ishicilelwe ku Ama-buffer conveyors
Umakwe ngaphansi: shrinkage, ukusebenza kahle komugqa, Isidluliseli se-buffer, buffering, ukupholisa, umugqa wokupakisha, ilebula izingqinamba, ukumisa, izikhala ezincane, isikhathi sokuphendula, izihibe eziningi, DBC202, ukusebenza kahle, umshini wokugunda
NgoLwesine, 29 Mashi 2018 by UCristina Maria Sunea
Ukupholisa & itafula le-buffer - ngokusebenza okubili
Ithebula elipholile neliphazamisayo lixazulula ukupholisa nezinkinga ze-buffer ekushayeni komoya. Gwema ukumiswa komugqa emishinini yokulungisa / yabathengi futhi ugweme ama-bubble. Isidluliseli se-Buffer: 1200 mm ububanzi, 4000 mm ubude. Kwenyusa ukusebenza kahle komugqa wakho wokupakisha.
Ishicilelwe ku Amatafula wokupholisa
Umakwe ngaphansi: ukusebenza kahle komugqa, Isidluliseli se-buffer, buffering, ukupholisa, umugqa wokupakisha, ukumisa, izikhala ezincane, isikhathi sokuphendula, ukusebenza kahle, umshini wokugunda, ilebuli, ama-bubble kumalebula, itafula elipholile nelidonsa, I-DCT212
Ithebula elipholile neliphazamisayo - ngokusebenza okubili
Ithebula elipholile neliphazamisayo lixazulula ukupholisa nezinkinga ze-buffer ekushayeni komoya. Gwema ukumiswa komugqa emishinini yokulungisa / yabathengi futhi ugweme ama-bubble. Isidluliseli se-Buffer: 1400 mm ububanzi, 4000 mm ubude. Kwenyusa ukusebenza kahle komugqa wakho wokupakisha.
Umakwe ngaphansi: ukusebenza kahle komugqa, Isidluliseli se-buffer, buffering, ukupholisa, umugqa wokupakisha, ukumisa, izikhala ezincane, isikhathi sokuphendula, ukusebenza kahle, umshini wokugunda, ilebuli, I-DCT213, ama-bubble kumalebula, itafula elipholile nelidonsa